ShweMinThar: February 2016
လူတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သက်သတ်လွတ် စားကြပါတယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ၊ ဓလေ့ထုံးစံနှင့် မိရိုး ဖလာ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေရှိသလို တိရစ္ဆာန်တွေ အပေါ် မေတ္တာထားတာ ကရုဏာထားတာသက်သက်ကြောင့် သက်သတ်လွတ်စားသူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ မိမိယုံကြည် အားထားသူ၊ ရဟန်းသံဃာ၊ ဆရာသမား မိဘတို့ကို ကတိ ပေးပြီး သက်သတ်လွတ် စားသူတွေရှိသလို တစ်စုံတစ်ရာ ကို အဓိဌာန်ပြုပြီး အသားငါးမစားတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါ တယ်။ ခုခါမှာတော့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ပြီး သက်သတ်လွတ် စားသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အ ပြားမှာသာမက အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း များပြား လာနေ ပါ တယ်။
* သက်သတ်လွတ် စားပုံအမျိုးမျိုး
တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးရဲ့ အသားနှင့် ကလီစာတွေကို စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ကို သက်သတ်လွတ်စား တယ် (vegetarianism) လို့ ယေဘုယျပြောကြပါတယ်။ သက်သတ်လွတ် စားသူဟာ အသားငါးရှောင်ပေမယ့် ကြက်ဥဘဲဥစတဲ့ ဥအမျိုးမျိုးစားတယ်။ နွားနို့၊ ဆိတ်နို့စတဲ့ နို့အမျိုးမျိုးလည်း သောက်တယ်ဆိုရင် Ovolacto Veget- rarian လို့ ပြောပါတယ်။ OVO ဆိုတာ ဥကို ပြောတာဖြစ်ပြီး Lacto ဆိုတာက နို့ကို ပြောတာပါ။ အသားငါးမစားဘူး၊ နို့ မသောက်ဘူး၊ ဥတော့စားတယ်ဆိုရင် OVO Vegetarian လို့ ပြောပါတယ်။ သားငါးမစားဘူး၊ ဥမစားဘူး၊ နို့တော့ သောက်တယ်ဆိုရင် Lacto Vegetarian လို့ ပြောပါတယ်။ အသား၊ ငါး၊ ဥအမျိုးမျိုးနှင့် တိရစ္ဆာန်နို့အမျိုးမျိုးသာမက ပျားရည်အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်နှင့် ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ဘာမှ မစားသုံးဘူး၊ အပင်ထွက်အစားအစာတွေသာ စား သုံးသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ Vagan လို့ ပြောပါတယ်။ အသီးအရွက်ပဲ စားတာတောင် ချက်ပြုတ်မ စားသူကို Raw Vegetarian လို့ ပြောပါတယ်။ သစ်သီး တစ်မျိုးပဲ စားသူကို Fruitarian လို့ ပြောပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး
ခုခါမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အဖြစ်များ နေတဲ့ အဝလွန်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးစတဲ့ ရော ဂါတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့၊ ဆီးချို၊ သွေးချိုရောထိန်း သိန်းဖို့ စတာတွေအတွက် အဆီစားသုံးမှုကို လျှော့ချင်တယ် ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံး စားသောက်နည်းက သတ္တဝါတွေ ရဲ့ အသားတွေ ကလီစာတွေကို မစားဘဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ်စားလျှင် အဆီစားတာ နည်းသွားတယ်
သက်သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ အသားစားသူတွေ ထက် ကယ်လိုရီ (Calorie) စားသုံးမှု နည်းတတ်ကြပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်သမားတွေ အများဆုံးစားသုံးလေ့ရှိတဲ့ ကောက်နှံအသီးအရွက်နှင့် သစ်ဥသစ်ဖုတွေဟာ အသား တွေ ကလီစာတွေလို အဆီပါဝင် မှုမများတာကြောင့် အဆီရ တဲ့ ကယ်လိုရီအချိုးအဆ (Proportion of Calorie From Fat) ဟာလည်း အသားသူတွေထက် နည်းတတ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုနည်း ခြင်း၊ အဆီကရတဲ့ ကယ်လိုရီအချိုးအဆနည်းခြင်းတို့က ကိုယ်အလေးချိန် များခြင်း အဝလွန်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာကို နည်းစေပါတယ်။
အရပ်အမောင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို အချိုးချပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် သက်သတ်လွတ်စားသူတွေ က ပိုပြီးသွယ်လျတဲ့ အချိုးအဆကို ပိုင်ဆိုင်တတ်ကြပါ တယ်။ ဘီအမ်အိုင် (Body Mass Index-BMI) မများဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အသားစားရင် အသားတွေနှင့်ကပ်ပြီး ပါလာတဲ့ ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fat) တွေကိုရှောင်ဖို့၊ ဖယ်ထုတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ပြည့်ဝဆီ စားသုံး ခြင်းဟာ သွေး ထဲမှာ ခိုလက်စထရော (Cholesterol) အဆီပမာဏကို မြင့်မားစေပြီး သွေးကြောတွေပိတ်ဆို့မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခုခေတ် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေ ရဲ့ အသား တွေဟာ သဘာဝအတိုင်း မြက်တွေသစ်ရွက်တွေစားပြီး ကြီးထွားရတဲ့ တိရစ္ဆာန် တွေရဲ့ အသားထက် အဆီပိုများပါ တယ်။ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေရဲ့ သွေးထဲ ခိုလက်စထ ရောပမာဏဟာ အသားစားသူတွေရဲ့ သွေးထဲက ခိုလက်စထ ရောပထမာဏထက် ၂ဝ% လောက် နိမ့်ပါတယ်။ ဒါက သက်သတ်လွတ်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပုံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သက်သတ်လွတ် စားခြင်းဟာ အသက်အရွယ်တိုင်း အတွက် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်၊ အချို့ သော ရောဂါတွေ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်လို့ ကနေဒါ နိုင်ငံ အာဟာရနှင့် အစားအသောက်ဗေဒ ပညာရှင်များ အကယ်ဒမီ (The Academy of Nutrition and Dietetics and Dietitians of Canada) က ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အသားစားသူတွေဟာ သက်သတ် လွတ် စားသူတွေထက် အဆစ်ရောင်ရောဂါ (Arthritis)၊ အူအတတ်ရောင်ရောဂါ (Appendicitis)၊ ရင်သားကင်ဆာ (Breast Cancer)၊ အူမကြီးကင်ဆာ (Colon Cancer)၊ ဆီကျိတ်ကင်ဆာ (Prostate Cancer)၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဆီးချို သွေးချို၊ သည်းခြေမှာ ကျောက်တည်ခြင်း (Gall Stone)၊ ဂေါက်အဆစ်ရောင်ရောဂါ (Gout)၊ သွေးတိုး၊ လေငန်း၊ သွေးကြောထုံးရောဂါတွေ ပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်။ ငယ် ငယ်ကတည်းက သက်သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ အသား စားသူတွေထက် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ပြရတဲ့အကြိမ် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းပါတဲ့။ ဒါ့အပြင် သက် သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုပြီး ကြံ့ခိုင်ကြပါ တယ်။ အောင်မြင်ခဲ့ ကြတဲ့/လောလောဆယ်အောင်မြင် နေတဲ့ အားကစားသမား အများအပြားမှာ သက်သတ် လွတ်စားသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
* ဆီးချို၊ သွေးချိုဝေဒနာရှင်တွေ သက်သတ်လွတ် စားနိုင်သလား
ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံစတဲ့ အပင်ထွက်အ စားအစာ များများစားသူတွေဟာ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို သွေချိုရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ နည်းတယ်ဆိုတာ သုတေသနတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ Seventh day Adventist ခရစ်ယံတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ နှုန်းဟာ အခြားလူတွေမှာ ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာရဲ့ တစ်ဝက် လောက်ပဲရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Seventh day Adventist တွေထဲမှာမှ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ သက်သတ် လွတ်မစားသူတွေထက် ပိုပြီးတော့ပင် နည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ အရပ်အ မောင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် အချိုးအဆပိုကောင်းခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘီအမ်အိုင် နိမ့်ခြင်းနှင့် အစာမျှပိုပြီး စားသုံး ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ ဒီအချက်နှစ်ချက်ကြောင့် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းဟာ အစွမ်း ပိုပြီး ပြနိုင်ပါတယ်။ (Insulin Sensitivity ပိုပြီးကောင်းပါ တယ်။) ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါဖြစ်နေသူတွေအတွက် လမ်း ညွှန်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် သက်သတ်လွတ်အစား အစာတွေကို စားသုံးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ် စားခြင်းနှင့် အရိုးကျန်းမာရေး
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့် အရိုးကျန်းမာရေးတို့ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပုံက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ နို့သောက် ခြင်း၊ အရိုးပါဝါးစားလို့ရတဲ့ ငါးကလေးတွေ စားသုံးခြင်းက အရိုးတွေ တည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်စီ ယမ်နှင့် ပရိုတင်းတွေ အလုံ အလောက်ရရှိစေပါတယ်။ အသားငါးကို သင့်တင့်ရုံစားသုံးခြင်းက ပရိုတင်းနှင့် အာ ဟာရတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက် အရိုးတွေကြံ့ခိုင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိရစ္ဆာန်မှရတဲ့ ပရိုတင်းတွေ စားသုံးမှု များလွန်းခြင်းက တော့ အရိုးထဲက ကယ်လ်စီယမ်တွေ သွေးထဲကို ထွက်လာ အောင်၊ သွေးထဲက ကယ်လ်စီယမ်တွေ ဆီးထဲက ထွက်သွား အောင် အားပေးတဲ့အတွက် အရိုးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေပါတယ်။ နို့သောက် တဲ့ သက်သတ်လွတ်သမားတွေအ နေနဲ့ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များများစားခြင်းကလည်း အရိုးကျန်းမာရေး ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဟင်းရွက်အများအပြားမှာ အရိုးတွေ တည်ဆောက်ပြုပြင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ြ<ွကယ်ဝပါတယ်။ အသားစားသုံးမှုများလျှင် အသားတွေထဲက ဆာလဖာပါ တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် (Sulphur-Containing Amino Acid) တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အက်ဆစ်သဘာဝ လွန်ကဲ (Acidosis ဖြစ်) ပြီး အရိုးတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ထိခိုက်နိုင်တာကို ဟင်းသီးဟင်း ရွက် သစ်သီးဝလံတွေမှာပါတဲ့ ပိုတက်စီယမ် (Potassium) က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စား သုံးမှုကို မြှင့်တင်လိုက်ရုံနဲ့ ဆီးထဲကနေ ကယ်လစီယမ်တွေ ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းပြီး အရိုးတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ပိုကောင်းလာ တာကို တွေ့ရပါတယ်။
သက်သတ်လွတ် အစားအစာတွေမှာ ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fat) နည်းပါ တယ်။ ခိုလက်စထရောနည်းပါ တယ်။ တိရစ္ဆာန်ထွက် ပရိုတင်း (Animal Protein) တွေ နည်းပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ အစာမျှင်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မက်ဂနီစီယမ်၊ ဖောလစ် အက်ဆစ်နှင့် အင်တီအောက်စီဒင့် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဗီတာမင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အီး နှင့် ဖိုက်တိုကင်မီကယ် (Phytochemical) တွေ များပါ တယ်။
အသား ငါးတွေမှာသာပါပြီး၊ ကောက်နှံ၊ သစ်ဥသစ် ဖု၊ အသီးအရွက်၊ အပွင့်၊ အစေ့အဆံ အစရှိတဲ့ အပင်ထွက် အစားအစာတွေမှာ မပါတဲ့ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တု အာဟာရရယ်လို့ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ သက်သတ် လွတ် အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီး ဝလံ ကောက်နှံအမျိုးမျိုးနှင့် သစ်ဥတစ်ဖု အစေ့အဆံတွေကို စုံစုံလင်လင်မျှမျှတတ စားတတ်ဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။ သက်သတ်လွတ် အစားအစာ တွေကို သေချာချာ ရွေးချယ် ပြီး ရောနှော စားသုံးမယ်ဆိုရင် သက်သတ်လွတ်စားခြင်း အား ဖြင့် အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံလောက် လောက် ရနိုင်ပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့် ပရိုတင်းအာဟာရ
အသားငါးတွေမှာ ပရိုတင်းကြွယ်ဝတယ်လို့ သိထား သူတွေဟာ သက်သတ်လွတ်စားရင်ပရိုးတင်း လုံလုံ လောက်လောက် ရပါတော့မလားဆိုတာ စိတ်ပူ တတ်ကြပါ တယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်အပါအဝင် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု ဌာနအများ အပြားက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေ၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေအရ သက်သတ် လွတ်စားသူတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းပမာဏကို အလုံ အလောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာ အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်ဥသစ်ဖုစတဲ့ အပင်ထွက်အစားအ စာတွေကရတဲ့ ပရိုတင်းတွေဟာ အသားငါးတွေကရတဲ့ ပရိုတင်းတွေလောက် အရည်အသွေးကောင်းပါ့မလားဆို တာလည်း စိတ်မပူပါနှင့်။ ပရိုတင်းဆိုတာ အမိုင်နိုအက်ဆစ် (Amino Acid) တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အတွက် အစား အသောက်တွေကနေ မဖြစ်မနေရအောင် စားသုံးဖို့လို အပ်တဲ့ အိုင်နိုအက်ဆစ်အမျိုးအစား၊ တစ်နည်း အားဖြင့် Essential Amino Acid တွေ စုံစုံလင်လင်ပါတဲ့ ပရိုတင်းမျိုး ကို အရည်အသွေးကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ Essential Amino Acid ချို့တဲ့လေ ပရိုတင်း အရည်အသွေး ကျဆင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်နို့တွေ၊ နို့ထွက်အစား အစာတွေ၊ ကြက်ဥဘဲဥစတဲ့ ဥအမျိုးမျိုးထဲက ပရိုတင်းတွေ ဟာ Essential Amino Acid တွေ စုံလင်အောင်ပါတာမို့ အသားငါးသာရှောင်ပြီး ဥအမျိုးမျိုးစားသူနှင့် နို့သောက်သူ သက်သတ်လွတ်သမားတွေအနေနဲ့ အရည်အသွေးကောင်း တဲ့ ပရိုတင်းရဖို့အတွက် ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီအစားအစာတွေ ကို အခါအားလျော်စွာ စားသုံးဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။
နို့နှင့် နို့ထွက်အစား အစာတွေရော၊ ကြက်ဥဘဲဥစတဲ့ ဥအမျိုးမျိုးပါ မစားတဲ့ သက်သတ်လွတ်သမားတွေအတွက် လည်း အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ပရိုတင်းတွေရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပထမနည်းက ပဲပုပ်၊ ပန်းဂျုံ၊ ဖရုံ စေ့၊ စိမ်းပြားရေညှိတို့လို Essential Amino Acid တွေ စုံ လင်အောင်ပါတဲ့ အပင်ထွက်အစားအစာတွေကို စားသုံး ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ကောက်နှံတွေကို တွဲဖက်စားသုံးခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ဆန်ဂျုံစတဲ့ ကောက်နှံတွေ မှာ ချို့တဲ့နေတတ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဟာ ပဲအမျိုးမျိုး မှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုးမှာ ချို့တဲ့နေတတ်တဲ့ အမိုင် နိုအက်ဆစ်တွေက လည်း ဆန်၊ ဂျုံစတဲ့ ကောက်နှံတွေမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထမင်းနှင့် ပဲဟင်းစားသလို ၊ နံပြားနှင့် ပဲပြုတ်စားသလို ကောက်နှံတစ်မျိုးနှင့် ပဲတစ်မျိုးကို တွဲဖက်စားသုံးခြင်း အားဖြင့် အစားအစာတစ်မျိုးမှာ ချို့တဲ့ နေတာကို ကျန်တစ်မျိုးက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပဲနှင့်ဆန်၊ ပဲနှင့်ဂျုံကို တစ်ပြိုင်နက် ရောပြီး စားရမယ်လို့ပင် မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်ရက်တည်းမှာ တစ်နပ်စီ ခွဲပြီး စားရင်လည်း အမိုင်နိုအက်ဆစ်အမျိုးမျိုးဟာ ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲ မှာ တွဲဖက်ပေါင်းစပ်မိသွားတာပါပဲ။
* သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့် သံဓာတ်အာဟာရ
သက်သတ်လွတ်အစားအစာတွေထဲမှာ သံဓာတ် ကြွယ်ဝတာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်တို့လို ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ဘရော့ကိုလီ (Broccoli) ခေါ် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတို့ကို အရွက်တွေဟာ သံဓာတ်ကြွယ်ဝ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပင်ထွက် အစားအစာတွေထဲက သံဓာတ် အမျိုးအစားတွေဟာ အသားနှင့် အသည်းမှာပါတဲ့ သံဓာတ်အမျိုး အစားတွေလောက် လွယ်လွယ်ကူကူ စုပ် ယူအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အတွက် သက်သတ်လွတ် စားသူတွေ ဟာ သံဓာတ်ချို့တဲ့နိုင်တဲ့ အလားအလာ များပါတယ်။ နို့ဟာ သံဓာတ်ြ<ွကယ်ဝတဲ့ အစာမျိုး မဟုတ်တာကြောင့် နို့ သောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မသောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သက်သတ် လွတ်စားသူတွေမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာများပါတယ်။ သက်သတ်လွတ် လွတ်စားသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းသို လှောင် ထားတဲ့ သံဓာတ်ပမာဏဟာလည်း အသားစားသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ သံဓာတ်ပမာဏထက် နည်းတတ်ပါတယ်။ သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အပင်ထွက်အစား အစာတွေကို ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ ရှောက်သံပရာမျိုးနွယ် အသီးတွေ၊ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းရွက်တွေနှင့် ရော နှောစားသုံးခြင်းအားဖြင့် သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ပိုကောင်း စေနိုင်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ သက်သတ် လွတ်စားသူတွေအတွက် သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ကာကွယ်ဖို့ သံဓာတ်အာဟာရဖြည့်ထားတဲ့ သက်သတ်လွတ် အစား အစာ (Iron Fortified Food) တွေ ရှိပါတယ်။ အဲသလို အစားအစာတွေ မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ သံဓာတ် ဆေးပြားဆေးရည်တွေ သောက်သုံးဖြည့်တင်းနိုင်ပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ်စားသူတွေချို့တဲ့နိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ
သက်သတ်လွတ်စားသူတွေချိုတဲ့နိုင်တဲ အာဟာရ ဓာတ် နောက်တစ်မျိုးက ဗီတာမင်ဘီတွဲ (Vitamin B12) ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တွဲကို အပင်ထွက်အစားအစာတွေ မှာ တွေ့ရလေ့မရှိပါဘူ။ တိရစ္ဆာန်ထွက် အစားအစာတွေမှာ သာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နို့သောက်သူ၊ ဥစားသူ သက် သတ်လွတ်သမားတွေအတွက်တော့ နေ့စဉ်စားနေကျ အစားအသောက်တွေကနေ ဗီတာမင်ဘီတွဲကို ရနိုင်ပါ တယ်။ နို့လည်းမသောက်၊ ဥလည်းမစားသူ သက်သတ် လွတ်သမားတွေအနေနဲ့ ဗီတာမင်ဘီတွဲကို အာဟာရ ဖြည့်ထားတဲ့ အစားအစာ Fortified Food တွေကသော် လည်းကောင်း၊ ဆေးဝါးအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ မှီဝဲဖို့လိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ ဗီတာမင်တွဲ လိုအပ်ချက် (၂.၅ မိုက်ခရိုဂရမ်) ဟာ အလွန် နည်းတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပေမဲ့ ဗီတာမင်ဘီတွဲချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သွေးအာနည်းရောဂါနှင့် အာရုံကြောထိခိုက်မှုဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေဖြစ် ပါတယ်။
သက်သတ်လွတ်စားသူတွေ ချို့တဲ့နိုင်တဲ့ အာဟာရ နောက်တစ်မျိုးက DHA နှင့် EPA ဆိုတဲ့ အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ DHA နှင့် EPA တို့ကို အဆီများတဲ့ ပင်လယ်ငါးတွေနှင့် ငါးအဆီ (Fish Oil) တို့ကနေ အလွယ်တကူ ရနိုင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီး အက်ဆစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Alpha Lenolenic Acid ကို အပင်ထွက် အစားအစာအချို့မှ ရနိုင်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ DHA နှင့် EPA တို့ဖြစ်လာအောင် ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောင်းရတဲ့အလုပ်က မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် ငါးအဆီ ဆေးလုံးမသောက်သူ သက်သတ်လွတ် သမားတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုခါမှာတော့ ပင်လယ်ရေမှော် (Sea Weed) မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ DHA ဆေး လုံးတွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။
* သက်သတ်လွတ်စားခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အချက်တွေ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ လူတွေ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေကြပြီး အသက်သေဆုံးတဲ့ထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစာအဆိပ် သင့်မှု သန်းပေါင်းများစွာအနက် အများစုဟာ အသားငါး စားသုံးမှုတွေနှင့် ပတ်သက်နေပါတယ်။ သက်သတ်လွတ် စားသူတွေဟာ ဒီလိုအန္တရာယ် မျိုးမှ ကင်းဝေးကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသား ကို စားသူတွေဟာ အဲဒီ တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျွေးတဲ့ဟော် မုန်း အမျိုးမျိုးကိုလည်း စားသုံးနေကြရပါတယ်။ ဒီဟော် မုန်း တွေက အသားစားသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြော နိုင်ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျွေးတဲ့ အစာထဲမှာ ပဋိဇီဝ ဆေး (Antibiotic) တွေကိုလည်း ထည့်ပြီးကျွေးကြပါတယ်။ လူတွေဟာ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသားကို စားတဲ့အခါ အသား ထဲက ပဋိဇီဝဆေးတွေကိုပါ စားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ အသားအမျိုးမျိုးကိုစားရင်း ပဋိဇီဝဆေးတွေကို အမြဲစား သလိုဖြစ်နေတော့ လူမှာရောဂါဖြစ်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးတွေ က ဆေးမတိုးတော့ပါဘူး။ သက်သတ်လွတ်ဟာ ဒီအန္တရာယ် တွေကို ရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွား ပါတယ်။
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့အခါ တိရစ္ဆာန်အကောင်ရေက များ၊ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် မလွှဲမရှောင်သော ထိနေတွေ့နေတာကြောင့် တိရစ္ဆာန် တွေ အချင်းချင်း တွန်းတာ၊ တိုက်တာ၊ ခိုက်တာ၊ ဝရုန်းသုံး ကားဖြစ်တာတွေနည်းအောင် အစာထဲမှာ စိတ်ငြိမ်ဆေး (Tranquilizer) တွေ ထည့်ကျွေးတာလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဆေးတွေလည်း အသားစားသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်လာကြပါတယ်။ အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အခါ ဒီဆေးတွေက အသားစားသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဘယ် လိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အသားတွေထဲက ဟော်မုန်းတွေ၊ ပဋိဇီဝဆေးတွေ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေရဲ့ အန္တရာယ်တွေကိုကြောက်လို့ အသား မစားတဲ့လူတွေ အများအပြား ရှိလာနေပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 3:56 PM No comments:
ဓမ္မကထိက ဆရာတော်တစ်ပါး၏ သြ၀ါဒခံယူပွဲတစ်ခုတွင် သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး၏
သြ၀ါဒတစ်ခုကိုနာကြားရပါသည်။ “ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့ ပလ္လင်ပေါ်တက်တဲ့အခါ ပလ္လင်နဲ့ တန်တဲ့စကားကိုပဲပြော၊ပလ္လင်ပေါ်တက်ပြီး လမ်းဘေးက ကလေကချေတွေပြောသလိုစကား မျိုးကို မပြောနဲ့၊ ကလေကချေတွေပြောတဲ့စကားမျိုးကို ပြောမယ်ဆိုရင် ပလ္လင်ပေါ်တက်ဖို့ မသင့်ဘူး” ဟု နာကြားရပါသည်။
ထို့ပြင် ဆရာတော်ဘုရားသည် တပည့်များကိုလည်း
ဤသို့ဆုံးမတတ်ပါသည် “မင်းတို့တွေ တချိန်မှာ ပလ္လင်ပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင် မတက်ခင် ကတည်းက ပိဋကတ်စာပေတွေကို သေချာလေ့လာ၊ လေ့လာပြီးမှပြော သေချာလေ့လာခြင်းမရှိဘဲ နောက်မှ မှားသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကိုမပေးနဲ့” ဟု အမြဲဆုံးမလေ့ရှိပါသည်။
မှန်ပါသည်၊ မည်သူမှ အမှားနှင့်မကင်းနိုင်ကြပေ၊ သို့သော်လည်း ဓမ္မကထိက ဆရာတော်၏ အမှားသည် စေတနာအမှားပင် ဖြစ်စေကာမူ လူပေါင်းမြောက်များစွာ အယူအမြင်တွေ မှားသွားနိုင်ပါသည်။
မပြစ်မှားသင့်သူကို ပြစ်မှားနိုင်ကြသည်။ ဤ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေရဟန်းတပါးနှင့် ဆွေးနွေးဖြစ်ဖူးသည်။ ဒကာ၊ ဒကာမတွေမှာ ချွေးနည်းစာနဲ့ ရှာထားတာလေးတွေနဲ့ လိုလေသေးမရှိအောင် လှူဒါန်းထောက်ပံ့ ကိုးကွယ်ကြရှာတယ်။
သူတို့ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တဲ့သူက နိဗ္ဗာန်ပို့မယ့်သူမဟုတ်ဘဲ
အပါယ်ဆွဲချတဲ့သူဖြစ်နေရင် မိအေးနှစ်ခါ နာတာထက် ပိုဆိုးသည် ဟူ၏။
မှန်ပေသည် ဘုရားရှင်က သတ္တ၀ါများအားသံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ထားရစ်ခဲ့သည့် တပည့်သားကြောင့် သတ္တ၀ါအများ
အပါယ်သို့ချည်း သွားကြရမည်ဆိုပါလျှင် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတစ်ခြား၊ ခါးတောင်းကျိုက်တလွဲ တင်တလွဲဖြစ်ပေတော့မည်။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဆုံးမတော်မူသည့် “ဆရာမှားပါက တပည်အများမှာ တသံသရာလုံးမှောက်သွားနိုင်သည်”
ဆိုသော ဆုံးမသြဝါဒကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ဒကာ ဒကာမများ သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သလို တချိန်မှာ
ဓမ္မကထိက လုပ်ကြမည့် မျိုးဆက်သစ် ညီတော် နောင်တော်များလည်း သတိပြုဆင်ခြင်သင့်လှပါ၏။
ဤတွင် စာရေးသူ အကြိမ်ကြိမ်အခါ နာကြားနေမိသော ပါချုပ်ဆရာတော်
ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ တရားတော်ထဲမှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြချင်ပါသည်၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အထပ်ထပ်နားကြားဖြစ်ပါသည်၊ စာရေးသူနှင့် နီးစပ်ရာ ဒကာ ဒကာမ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တို့ကိုလည်း လက်လှမ်းမှီသမျှ ဖြန့်ဝေ၍ နားကြားစေခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာတွင် “တရားသိလျက်
အကျင့်ခက်” ဟူသော ထိုတရားတော်ထဲမှ မှတ်သားလိုက်နာဖွယ်ကောင်းသော စကားရပ်တို့ကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါအံ့..
“ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့ စာသင်လိုက်လို့ ဘာစာမေးပွဲတွေအောင်တယ်၊
ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတွေရတယ် စာပေတွေတတ်လာလို့ နာမည်လေးတစ်လုံးရလာတဲ့အခါကျတော့ ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့
ဒကာ ဒကာမတွေများလာတယ် များလာတော့ လာဘ်လာဘတွေ များလာတယ်၊ များလာတော့ စိတ်ကြီးဝင်လာတယ်၊ ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ သဘာဝအတိုင်း မာန်မာနတွေ ဖြစ်လာတယ်၊ သင်ထားတဲ့ စာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ လာဘ်လာဘတွေပေါလာတယ် လာဘ်လာဘတွေပေါလာတာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ ငါသိတယ် ငါတော်တယ် ငါတတ်တယ် ဘေးကလည်းဝိုင်းပြီးမြှောက်တာတွေ ပါလာတဲ့အခါကျတော့ မာန်တက်လာတယ်တဲ့ မာန်တက်လာပြီဆိုကတည်းက
သိတော့သိပြီ မကျင့်တော့ဘူး အောက်ချေလွတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်သတတ်တုံး ဆိုရင် ပြောချင်ရာပြောတာတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်တာတို့ သူပြောသမျှ ပရိသတ်က လက်ခံနေတယ် ဆိုရင် ပြောချင်ရာပြောတယ် သူလုပ်သမျှ ပရိသတ်က လက်ခံနေပြီဆိုရင်လည်း လုပ်ချင်ရာလုပ်
တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်”
ဆရာတော်ဘုရားသည် အထက်ပါတရားတော်ကို အကြောင်းမဲ့ဟောကြားခြင်းမျိုးတော့ မဖြစ်တန်ရာ၊ ယခုအခါသာသနာအတွင်း၌ ပေါ်ပေါက်နေသော ဟောချင်ရာဟော ပြောချင်ရာပြောနေသော ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကြောင့် သာသနာအရေးကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတော်မူသောကြောင့် ဟောခြင်း
“မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ တရားဓမ္မဟာ မှန်ကန်မှုရှိတယ်၊
မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းလေ့လာသိရှိဖို့ လိုတယ်၊ ထိုသိရှိထားတဲ့အတိုင်း တရားနာ ပရိသတ်တွေ မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဟောပြောဖို့လို့တယ်၊ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ ဘုရားဟောတဲ့တရားကို မဟောဘူးလို့ ပြောမယ်၊ မဟောတာကိုတော့ အဟောလုပ်ပြီး ပြောမယ်
ဆိုလို့ရှိရင် မမှန်ကန်တော့ဘူး၊ မမှန်ကန်ရုံတင် မကဘူး အဂုင်္တ္တရနိကာယ်မှာ မြတ်စွာဘုရား
ဘုရားက ဟောထားတာ ရှိတယ်..
နံပါတ် - ၁ - ဘုရားဟောတဲ့တရားကို မဟောဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
နံပါတ် - ၂ - အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကုသိုလ်တွေ များစွာဖြစ်ပွါးစေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊
နံပါတ် - ၃ - မြတ်စွာဘုရားဘုရား သာသနာတော်ကြီးကို ကွယ်ပျောက်အောင် လုပ်ရာရောက်တယ်၊
ဘုရားဟောတာကို မဟောဘူးလို့မပြောမိဖို့၊ ဘုရားမဟောတာကိုတော့
အဟောလုပ်ပြီး မပြောမိဖို့ ဓမ္မကို အဓမ္မလို့ မပြောမိဖို့ အရေးကြီးတယ်၊ လောကလူတွေက မာန်မာနတက်လာတဲ့အချိန်မှာ
ပြောလို့မရဘူး၊ ဒါအမှန်ဘဲ စီပွါးတွေတက်လာလို့ အောင်မြင်နေတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဆုံးမလို့ မရဘူး၊ ရာထူးတွေ သိပ်မြင့်နေရင်လည်း ဆုံးမလို့မရဘူး လူတွေဟာ တခုခုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်
မှန်ပါသည်။ ယခုခေတ်ကာလတွင်လည်း စာရေးသူ မြင်တွေ့နေရပါသည် နာမည်လေးတလုံးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ဘုရားဟောတဲ့တရားကို မဟောဘူးလုပ်၊ ဘုရားမဟောတာကိုတော့ အဟောလုပ်၍ ဟောပြောနေသော
ပုဂ္ဂိုလ်အချို့အား အမှားကိုထောက်ပြဝေဖန်လျှင် မိမိဟောသော တရားမှန်ကြောင်း သေချာစွာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ စွပ်စွဲပုတ်ခတ်တတ်ကြပါသည်၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပါမက သူ၏ နောက်ပါတပည့်အပေါင်းပါတို့သည်လည်း
ထိုကဲ့သို့ပင် ငါ့ဆရာပြောတာပဲ အမှန် ငါ့ဆရာဟောတာပဲ အဟုတ် ဟုဆိုကာ မှန်ကန်သော အထောက်အထားဖြင့် ထောက်ပြဝေဖန်သူများကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ကြ
ပါသည်၊ ၀ိနစ္ဆယ ဆုံးဖြတ်တော်မူကြသော ထေရ်ကြီးဝါကြီး သံဃာ့နာယက ဆရာတော် သံဃာတော်အပေါင်းကိုပင် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာတာကိုပင်တွေ့ဘူးပေ၏။
စာရေးသူတို့ ရဟန်းတော်(ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)များသည် စင်စစ်အားဖြင့် သာသနာ
ပြုဖို့အတွက်သာ သာသနာဆိုင်ရာ ပညာတို့ကို သင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ကောင်းကျိုးပြုဖို့အတွက်သာ မိဘဆရာသမား၊ ဒကာ ဒကာမများက စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေး ပညာတွေသင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သာသနာအတွင်းသို့ အမှိုက်များ ၀င်မလာအောင် သန့်ရှင်းတည်တန့်အောင် လုပ်ဖို့က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ရဟန်းတော် အားလုံး၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ကဿပ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် သာသနာကျန်ရစ်ခဲ့သော အချိန်က
သာသနာ ကို ကြည်ညိုသော မိသားစု တစ်စု သာသနာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်၊ သာဓိနီ အမည်ရသော မိခင်ကြီး၊ သာဏမည်သော အကိုကြီး၊ ကပိလ မည်သော ညီဖြစ်သူနှင့် တာပနာ - မည်သော ညီမဖြစ်သူတို့ အကျွတ်တရားရကာ သာသနာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာကြပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အသက်အရွယ်လေးရလာသော အကိုကြီးဖြစ်သူသည် တောရ
ဆောက်တည်ပြီး ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ကာ ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်
ညီဖြစ်သော ကပိလ သည်လည်း ပိဋကတ်သုံးပုံကို သင်ယူတတ်မြောက်လာပါသည်၊
စာတတ်လာတဲ့ အခါမှာ တပည့်ပရိသတ်တွေ များလာသည်၊ ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ ဒကာ
ဒကာမတွေများလာသည်။ ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး တရားကိုသိပြီး ကျင့်ရမယ့်အစား
မကျင့်ကြံတော့ဘဲ ပညာမာန်တွေတက်လာသည်၊ မာန်တွေတက်လာပြီး ကျန်တဲ့ရဟန်း
တွေအပေါ်မှာ အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်လာကာ သူ့လောက်မတတ်ဘူး၊ အလကား
နလပိန်းတုံးတွေ ဆိုပြီး ဆဲရေးလာပါတော့သည်၊ ကပိလ ဟာ သူများတွေကို အထင်သေး အမြင်သေးဖြစ်လာပြီးတော့ မောက်မာလာသည်၊ မောင်ဖြစ်တဲ့ ကပိလ ရဟန်းဟာ စာတတ်တော့ နှမဖြစ်သူ တာပနာ ဟာ ဂုဏ်ယူ၏၊ အမေဖြစ်သူ သာဓိနီ ကလည်း သူ့သားအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်လာသည်၊ နှားတောင်းရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ပြီး သူတို့ကပါ မာန်မာနတွေ တက်လာကြသည်။
ကပိလ ဟာ မာန်မာနတွေတက်လာပြီး တခြားရဟန်းတွေအပေါ်မှာ ရှုံ့ချဆဲရေးတိုင်းထွာ
လာသည်၊ အဲဒီလို ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ရဟန်းကောင်းတို့က “အရှင်ဘုရား စာတတ်ပေတတ် ဖြစ်ရဲ့နဲ့ အဲဒီလို ဆဲရေးခြင်း၊ အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်တာတွေကို မလုပ်ပါနဲ့” ဆိုပြီး ၀ိုင်းဝန်းဆုံးမကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကပိလ ဟာ မနာခံတဲ့အပြင် အဆုံးစွန်ထိ မိုက်ဇာတ်ခင်းလာပါတယ်။ ဘုရားမဟောတာကို အဟောလုပ် ပြောတယ်၊ ဘုရားဟောတာ ကိုကျတော့ မဟောဘူးလို့ပြောလာတယ်၊ ဓမ္မ ကိုလည်း အဓမ္မလို့ ပြောချင်ပြောတယ်၊ အဓမ္မကိုလည်း ဓမ္မလို့ ပြောချင်ပြောတယ်၊ ရဟန်းကောင်းတွေကလည်း ဆုံးမ၍မရတဲ့
အခါမှာ အကိုကြီးဖြစ်သူ ရဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အရှင်ဘုရားရဲ့ညီအား ဆုံးမပေးဖို့ တောင်းပန်လျှောက်ထားကြပါတယ်။ ရဟန္တာဖြစ်သော အကိုကြီးက သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဆုံးမပေမယ့်လည်း မနာခံပဲ လုပ်မြဲဆက်လုပ်တော့ အကိုကြီးဖြစ်သူကလည်း လျစ်လျူရှူ့သွား ပါတယ်၊ ကပိလ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးလာသလဲဆိုရင် ဒီတရားတွေဟာ အလကားပဲ
၀ိနည်းတရားတွေဆိုတာ အပိုတွေ ကျင့်နေလည်း အလကားပဲ ဆိုပြီး
တရားရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောပြီး ကဿပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကို ကွယ်အောင် လုပ်လာပါတယ်၊
ဂုဏ်သတင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက် သူ့နောက်ကလည်း ကိုးကွယ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ လိုက်ကြတယ်၊ အဓိက ကတော့ သူ့အမေ နဲ့ သူ့နှမတို့ဟာ သူပြောတာ ဘာမဆို အမှန်ပဲ သူလုပ်သမျှ အဟုတ်ပဲ ဆိုပြီးလိုက်ကြတယ်၊ ကပိလ သေတဲ့အခါမှာ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဆိုရင် အ၀ိစိငရဲသို့ ကျသွားပါတယ်၊ သူ့ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုပြီး အလိုတူအလိုပါဖြစ်တဲ့
မယ်တော်ဖြစ်တဲ့ ဘိက္ခူနီ၊ နှမတော်ဖြစ်တဲ့ ဘိက္ခုနီ နဲ့တပည့်အပေါင်းအပါတို့ဟာလည်း
ဤတွင် စာရေးသူ တင်ပြချင်သည်မှာ ကပိလ ရဟန်းသည် သိရက်နဲ့မိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်၊
မယ်တော်နှင့် နှမတော်တို့မှာ သား နှင့် မောင် ဟူဟော အစွဲကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့
ရောက်ပါသည်၊ ကြည်ညိုကိုးကွယ်သော ဒကာ ဒကာတို့သည်ကား မသိနားမလည်မှု့နှင့်အတူ ဂုဏ်သတင်းကြီးတာကို ဖက်တွယ်လျက် ဆရာမှားကို ချဉ်းကပ်မိသောကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့
စာရေးသူပြောလိုသည်မှာစာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ ဓမ္မကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ဆရာစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်းဖို့ အရေးကြီးလှပါသည်၊ မှန်ကန်သောဓမ္မ၊ စစ်မှန်သော တရား ဟုတ်မဟုတ် စမ်းစစ်တတ်ရပါမည်၊ တရားစစ်မစစ်ကို ဘုရားဟောတော်မူသော ပိဋကတ်ဟူသော ဓမ္မပေတံဖြင့် တိုင်းတာ၍ ရနိုင် ပါသည်၊ ဘုရားဟောနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိပါက အဓမ္မ ဟု မှတ်ယူရပေမည်။
ထိုအဓမ္မကို မသိနားမလည်မှုနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားမိရင် အပယ်ငရဲသို့ ကျရောက်နိုင်ပါသည်။
ယခုခေတ်အခါ ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုသော ဘုရားဟောတရားတွေကို အင်တာနက် မှာလည်း အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်၊ မစွမ်းနိုင်ပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ဆရာတော်များထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မေးမြန်းပြီး သေချာစွာ လေ့လာသင့်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာလေ့လာပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်မှသာလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ရည်မှန်းသော ထွက်မြောက်ရာလမ်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တရားမလိုက်၊ အမှားကြိုက်၊ ဆရာမိုက် နှင့် လွဲပါစေ ဟု ဆန္ဒပြုရင်း…….
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များ သာယာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည် ကျောင်းသား မဂ္ဂဇင်း မှ.
Posted by Alex Aung at 11:37 AM No comments:
ဆိတ်သားသင်္ဘောကင်းချက် - ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ဘဲဥကြော် - မ...
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားသည် တိုးတက်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ပါသလား..?
သူခိုး၊ ဓားပြထက် ဆိုးတဲ့ ရန်သူကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
♪ အမျိုးသမီး ရော့ခ်အဆိုတော် သျှီရဲ့တေးစီးရီး ၇ ခု...
အမဲသားကောက်စိုက်မချက် - ပဲကြီးနှပ်ဆီပြန် - မုလာဥဖြ...
BRT စနစ်က ရန်ကုန်မြို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဆင်...
ဟိုင်ဟစ်၊ ဟန်ကင်၊ မောင်ဇံဆိုတဲ့ ချင်းတောင်ပေါ်က ရွာ...
The Union ပြည်ထောင်စုဆိုတာ
Facebook အတွက် နည်းပညာအချို့
ရေတံခွန်တောင်ပေါ်က ရွှေဟင်္သာ လိုဏ်ဂူတော်ဆီသို့
Facebook သုံးပြီး Log Out လုပ်ဖို့ သင့်မေ့သွားပါသလား?
ပဲပုစွန် ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် - ကဏန်းမန်ကျည်းမှည့်ချက်...
“ ၀ိနယ - ၀ိနည်း ”
♪ “iDevice များအားပညာရေးအတွက် အသုံးပြုခြင်း” ♫